Juan Mata oo wadahadal la furay Madaxa fulinta kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 15 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inaysan weli meesha ka saarin suurto-galnimada uu Juan Mata ku sii joogayo garoonka Old Trafford xilli ciyaareed kale.
Xiddigan khadka dhexe ee Spain ayaa heshiiskiisa waxa uu ku eg yahay bisha soo socota waxaana la la xiriirinayey isbuucyadii dhowaa inuu u dhaqaaqo doono kooxaha sida Barcelona iyo Juventus.
Mata ayaa ku guuldarreystay inuu ogolaado inuu heshiis cusub u saxiixo Red Devils, laakiin sida ay warinayso Jariiradda The Mirror 31 sano jirkaan inuu diiday inuu baxo xagaagan.
Guddoomiye ku xigeenka fulinta kooxda Man United ee Ed Woodward ayaa la warinayaa inuu Mata ugu yaaray xafiiskiisa kaddib markii ay Axaddii kooxda Man United ay guuldarro 2-0 kala kulmeen Cardiff City kulankoodii ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedka.
31-sano jirkaan ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo mustaqbalkiisa maalmaha yar ee inagu soo aaddan.
Ander Herrera iyo Antonio Valencia ayaa horay loo xaqiijiyey inaysan kooxda Man United joogi doonin marka ay heshiisyadoodu dhammaadaan bisha soo socota ee June.
Mesut Ozil oo xaqiijiyey inuusan xilli ciyaareedkan ka tagi doonin kooxdiisa Arsenal